साजन शाक्य, महासचिव, होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ घोषणा गरिए पनि उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन । २०२० को शुरूदेखि देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण सिजनमै पर्यटक आगमन शून्य रह्यो । गतवर्ष बाह्य पर्यटकको संख्या २ लाखमै सीमित रह्यो । नेपालमा १९६० को दशकदेखि पर्यटन व्यवसायमा निजीक्षेत्रको प्रवेश भएको थियो । त्यसयता पहिलोपटक दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेला ठूलो मार खेपेको पर्यटन क्षेत्र अहिले भने कोरोना महामारीका कारण शिथिल बन्यो । पर्यटनमा पनि सबैभन्दा बढी होटेल उद्योग प्रभावित भएको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन होटल उद्योग के–कस्ता रणनीतिका साथ अघि बढेको छ भन्ने विषयमा होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का महासचिव एवं काठमाडौं प्रिन्स होटेलका अध्यक्ष समेत रहेका साजन शाक्यसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना महामारी प्रभावित हस्पिटालिटी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गतवर्ष चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गर्‍यो, जसले पर्यटन व्यवसाय नै ठप्प भयो । अझ त्यसमा सबैभन्दा बढी होटेल उद्योगहरू मर्कामा परे । यो अवस्था हालसम्म पनि जारी छ । होटल क्षेत्रमा खर्बाैं लगानी छ । हानमा अहिले तीन वर्गका होटेल छन् । त्यसमा पर्यटकीय स्तरका होटेलहरू भाडामै चलेका छन् । भाडामा सञ्चालन भइरहेका होटेलहरूलाई मासिक भाडा तिर्न नै धौधौ भयो । दोस्रो पुराना होटेलहरू, जो ४० देखि ५० वर्षदेखि सञ्चालनमा छन्, त्यस्ता होटेलहरूमा भने कर्मचारी व्यवस्थापन नै चुनौती बन्यो । पुराना कर्मचारी र पारिश्रमिक पनि सोहीअनुसारले बढेको हुँदा कर्मचारी धान्नै गाह्रो स्थिति देखियो । पुराना होटेलहरूमा ऋणको भार कम भए पनि कर्मचारीको पारिश्रमिकमै ४० प्रतिशतसम्म खर्चिनुपर्ने थियो । तेस्रोमा नयाँ होटेलहरू, जसलाई कर्मचारीको व्यवस्थापन भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो भयो । यी तीन वर्गकै होटेलहरूको समस्या समाधानका सोही किसिमले माग राखिएकोमा सरकारले पनि सम्बोधन गर्नु सकारात्मक हो । अर्काे, होटेलको डिमाण्ड शुल्क, घर कर्जा, व्यवसायी करमा छूट र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि सरकारले गरेको योगदान सकारात्मक छ ।
नेपालमा कोरोना देखिएको १ वर्ष भइसकेको छ । यो अवस्थामा होटेल क्षेत्रले के कस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ?
अहिले पनि होटेल क्षेत्रले मासिक १ अर्ब ८० करोडको क्षति बेहोरिरहेको छ । यो क्षेत्रमा कर्मचारीकै व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो । होेटेल बन्द गर्नुपर्दा पनि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनैपर्नेछ । कर्मचारी तथा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन समझदारी पनि गरिएको छ । अहिले पनि पर्यटक आगमनमा सुधार नभएकोले २०२१ को डिसेम्बरसम्म होटेलको स्तरअनुसार घरमा बसेका कर्मचारीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ र काममा आउनेलाई भने पूर्ण पारिश्रमिक दिने सहमति भएको छ । यसो गर्नुको उद्देश्य होटेल पनि बचोस् र कर्मचारी पनि बाचून् भन्ने नै हो । हामीले अहिले कर्मचारीलाई होटेल खुलेन भनेर जागिरबाट निकालेका छैनौं । जुन दिनदेखि होटेल खुल्छ, त्यसबेला उहाँहरू आउन सक्ने वातावरण बनाइएको हो । अर्काे, होटेल खुले पनि पर्यटक आइसकेको अवस्था छैन । तेस्रो देश यूरोपमा बन्दाबन्दी छ भने भारत, बंगलादेश, चीन लगायत मुलुकमा संक्रमण बढेको छ । यो परिस्थितिमा होटेल कति दिन खोल्ने, कसरी कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । यो स्थिति अनिश्चित नै छ । त्यसमा मजदूर र सरकारको सहयोगले केही सहज वातावरण छ ।
२०२१ को मार्चमा पर्यटक आगमनमा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा सुधार देखिएको छ । बन्दप्रायः रहेको होटेल क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?
अहिले खुलेका होटेलहरूमा पनि अकुपेन्सी एकदमै कम छ । यद्यपि पर्यटक आगमनमा भएको सुधारले अकुपेन्सीमा केही झीनो सुधार देखिएको पक्कै हो । विदेशी पर्यटकहरू ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहणका लागि आइरहेका छन् । यसले शून्य अवस्था भन्दा केही फरक परेकै छ । कोभिड कम भएमा आगामी सिजन (अक्टोबर–नोभेम्बर)मा पर्यटक आउने सम्भावना धेरै छ । अहिले पनि उक्त सिजनका लागि बुकिङ हुने अवस्था छ । मार्च–अप्रिलमा ट्रेकिङ सिजन अनुकूल भएको र भारतबाट काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन बस्न भारतीयहरू आउँदा पर्यटक पनि बढी देखिएको हो । हानका सदस्य होटेलहरूको क्षमताबाटै अहिले ५० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सकिन्छ । पाँचतारे होटेल १५, एकदेखि चारतारे होटेलको संख्या ७०, रिसोर्ट तथा बुटिक होटेल पनि ८० जति छन् भने बाँकी पर्यटकस्तरका होटेल ३०० जति छन् । पर्यटकहरू छरिएर बस्दा अधिकतम एउटा होटेलको अकुपेन्सी १० प्रतिशतसम्म जान सक्छ । पर्यटक आगमन बढ्दै जाँदा यसमा पनि सुधार हुनेछ ।
होटेल उद्योग नै धराशयी भएर व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको प्रतिवेदन हानको छ । यस्तो अवस्था आएकै हो त ?
यो अवस्था लम्बिँदै गयो र ५ वर्षसम्ममा पनि पुनरुत्थान हुने सम्भावना क्षीण भयो भने होटेल सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसपछि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तै अवस्था द्वन्द्वकालमा पनि देखिएकै हो । त्यसबेला यो अवस्था ५ वर्षसम्म लम्बिँदा दरबारमार्गको शेर्पा होटेल, ललितपुरको होटेल नारायणी र थापाथलीको ब्लु स्टार होटेल बन्द हुन पुगेका थिए । अहिलेको अवस्था झन् जटिल भएकाले अनिश्चितता लम्बिरहे ५ वर्षसम्ममा आधा होटेल बन्द हुन सक्छन् ।
अहिले खासमा दुईथरी लगानीकर्ता देखिन्छन्– पुराना र भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी लगानी गरेका नयाँ लगानीकर्ता । सबैभन्दा बढी समस्यामा को छन् ?
सबैखाले होटेलमा समस्या नभएको होइन, समस्या छ । पुराना तथा स्थापित भइसकेका होटेलमा कर्मचारी व्यवस्थापनकै समस्या हो । अहिले नयाँ लगानीकर्ता बढी समस्यामा देखिन्छन् । किनभने २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ घोषणाको तयारी गर्दादेखि नै त्यसलाई लक्षित गरेर यो क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता आएर ठूलो मात्रामा लगानी थपे । उनीहरूले होटेल खोले । तर प्रतिफल भने पाइनसक्दै होटेल उद्योग नै जटिल अवस्थामा आयो । यस्ता लगानीकर्ताको ऋण नै बढी भयो । अहिले राज्यले केही सहयोग गरेको छ । अब राज्यले नै यस्ता लगानीकर्तालाई बचाउन सक्छ । ५ वर्षसम्मका लागि ब्याज छूट तथा तिर्ने समय थप्न सके लगानीकर्तालाई जोगाउन सकिन्छ । यो राज्यको पनि दायित्व हो ।
अहिले काठमाडौंका तारे होटेलहरूले पनि फुड डेलिभरी तथा विभिन्न खाले अफर दिएर रेष्टुराँहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो बिजनेश टिकाउन चालिएको कदम हो ?
ठीक हो । किनभने पर्यटक नआए पनि होटेलमा रहेका रेस्टुराँ सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हो । लकडाउनले होम डेलिभरी, ब्यांक्वेटहरू चलाएर त्यहाँबाट पनि केही आम्दानी भएको छ । विवाहको सिजनमा पनि ब्यांक्वेट सञ्चालन गर्दा शून्य कारोबार भएको होटेल उद्योग केही आयआर्जनको बाटो बनेकै हो । पहिला तारे होटेलहरूमा ब्यांक्वेट सेवा भए पनि ‘टेक अवे’को प्रचलन थिएन । तर बन्दाबन्दीपछि यसको प्रचलन बढेकाले यसमा अवसर खोजिएको हो ।
अकुपेन्सी नै अत्यन्त न्यून भएका बेला होटेलहरू खोल्नैपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुँदै आएको छ ?
नयाँ होटेलहरू ऋणबाटै चलेका छन् भने पुराना होटेलको अवस्था पनि यही हो । आन्दानी नै नभएपछि पुराना होटेल भने विभिन्न आफ्नै फण्डबाट पनि चलेको देखिन्छ । तर, समग्रमा अहिले ऋणबाटै सबै खर्च धानिएको अवस्था छ ।
विगतमा आन्तरिक पर्यटकलाई खासै वास्ता गरिएको पाइँदैनथ्यो । तर अहिले भने यो अवस्था फेरिएको छ । किन ?
होइन, विशेषगरी काठमाडौं बाहिर आन्तरिक पर्यटकमार्फत नै पर्यटन क्षेत्र चलयमान बनेकै हो । तर, काठमाडौंले भने आन्तरिक पर्यटकलाई तान्न नसकेको हो । काठमाडौंमा आन्तरिक पर्यटक आउन सक्ने अवस्था पनि छैन । धेरै घुम्न निस्कने भनेको धेरै जनसंख्या भएको यही काठमाडौंबाट हो । यद्यपि अहिले आन्तरिक पर्यटकको महत्त्व बढेको छ । किनभने कोरोना संक्रमणपछि आन्तरिक पर्यटकलाई ५० प्रतिशत छूटमा प्याकेज दिएर अफर गरिएको छ । उहाँहरूले पनि गुणस्तरीय सेवा लिन पाउनु भएको छ ।
मुलुकका आन्तरिक गन्तव्यहरू आन्तरिक पर्यटकबाट सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । तर, काठमाडौं अझै पनि आन्तरिक पर्यटकका लागि गन्तव्य बन्न नसकेको हो ?
काठमाडौंमा धेरैजसो मानिस बाहिरी जिल्लाकै छन् । काठमाडौंबाटै बाहिर जाने ट्रेण्ड स्थापित भइसकेको छ । बाहिरबाट भने काठमाडौं घुम्न आउने प्रचलन छैन । त्यसले गर्दा पनि आन्तरिक पर्यटक काठमाडौंमा कम हो । विदेश जाने र आउनेहरू भने घुमघाम गर्छन् । आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी असनदेखि दरबारमार्गसम्म रात्रिकालीन यात्रा (नाइट वाक) कार्यक्रम हान र महानगरपालिका मिलेर बनाइँदै छ ।
मुलुकको हस्पिटालिटी क्षेत्र टिकाउन र संरक्षण गर्न व्यवसायीबीच कस्तो सहकार्य तथा रणनीतिमा छलफल भइरहेको छ ?
होटेलमात्रै नभएर सम्बन्धित नाट्टा, टान, सोट्टो जस्ता संघसंस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर पर्यटक कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल तथा गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले संयुक्त रूपमा पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभागदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डसम्म लबिङ गरेका छौं । अब मार्केटिङ, प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रम गरिनेछ । यूरोप तथा टाढाका पर्यटक ल्याउने नसोचौं, अहिलेका लागि नजिकका देशलाई धार्मिक पर्यटकका लागि काम गरौं भन्ने हो । प्रचार प्रसारमा संयुक्त रूपमा जान सकिन्छ ।
होटेल उद्योगलाई औद्योगिक वर्गका साथै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न तपाईंहरूको माग छ । यसो गर्दा कस्तो लाभ लिन सकिन्छ ?
यो माग पहिलादेखि नै गर्दै आएको हो । यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा त जरुरी नै देखियो । किनभने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्दा अन्य उद्योगले पाउने जस्तै सुविधा पाउन सकिन्छ । जस्तै– अहिले फ्याक्ट्रीहरूले पाउने सुविधा र होटेलले पाउने सुविधा फरक छ । उदाहरणका लागि, अहिले डिमाण्ड शुल्कको कुरा गरिएको छ । यदि उद्योगको मान्यता दिइएको भए यस्तो शुल्क कम, युनिटको दर पनि कम र यता बैंकको लोन पनि कम हुँदो रहेछ । सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई राखेको छ । तर यो तथ्यांक मिलेको छैन । पर्यटक आए, होटेलमा बस्छन् र होटेललाई प्रत्यक्ष आम्दानी भयो । तर बाहिर गएर पनि पर्यटकले विभिन्न खाले किनमेल गरेको हुन्छ । तर, यस्तोखाले खर्च प्रत्यक्ष नदेखिँदा उनीहरूले गर्ने खर्च नै कम देखिन्छ । एउटा पर्यटकले होटेलमा तिर्नेभन्दा १० गुणा बाहिर खर्चिन्छ । तर यो रेकर्ड नै भएन । त्यसकारण कुल गार्हथ्य उत्पादनमा पनि पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । हाम्रो तथ्यांकले भने करिब ९ प्रतिशतसम्म रहेको देखाउँछ ।
घट्दो संक्रमण दर र खोप पनि लगाउने लहर चलेका बेला पुनः कोरोनाकोे नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ । यसले उठ्न खोजेको पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितता थपेको हो ?
केही सतर्कता त अपनाउनैपर्छ । तर संक्रमण दर कम भएको नेपालमा पर्यटक आगमनका लागि कुनै पहल नगर्नु थप असफलता हुनेछ । कोभिडको संक्रमण न्यून छ । यो सन्देश गन्तव्य मुलुकमा पुर्‍याउनुपर्छ । जस्तै– नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रमा जनसंख्या कम हुने भएकाले घुमघामका लागि सुरक्षित छ र ढुक्क भएर नेपालमा आउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ ।
विश्व बैंकले पनि २०२२/२०२३ मा नेपालको पर्यटन पूर्ण रिकभर हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसअघि व्यवसायीको पनि यही आकलन थियो । यो अवस्थामा कर्मचारी र होटेल उद्योगलाई टिकाइराख्न दीर्घकालीन योजना के छन् ?
हामीले पहिलेदेखि त्यही भन्दै आएका छौं । कोरोना देखिँदादेखि नै २०२१ सम्ममा पनि पर्यटक आउने सम्भावना निकै कम छ भन्दै आएका थियौं । अहिलेको अवस्थालाई रिकभर गर्न पाँच वर्ष नै आवश्यक छ भनिएको छ । ५ वर्षभित्र नेपालमा आउने पर्यटकको आगमनले पुरानै लय समात्न सक्छ भन्ने अनुमान हो । अहिले यूरोपमा नभए पनि नजिकका एशियाली देशमा मार्केटिङ, भारतमा पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गरिएको छ । यस्तैखाले प्रचारप्रसारका काम गर्ने हो । अहिले परिस्थिति उल्टो छ । पहिले विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकका लागि क्वारेन्टाइन राखिएकोमा अहिले भारतीयहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न काठमाडौं आउने र १४ दिन बसेपछि खाडी मुलुक जाने गरेका छन् । यसले पनि भारतीय पर्यटकको संख्या बढेको छ ।